24H Adeegga Caalamiga ah - NBC Electronic Technologic Co., Ltd.
Xafiis ka samee Dongguan (Dhul -weynaha Shiinaha), Hong Kong iyo Ameerika, jawaab deg deg ah macaamiisha caalamiga ah 24H.
Si loo siiyo adeeg wanaagsan macaamiisha, iyada oo ku saleysan warshadda, waxaan xafiis ka dhignay geogia America, HongKong (Shiinaha), Dongguan Nancheng (Dhul -weyne), oo loogu talagalay R&D /Iibinta, si loogu jawaabo macaamilka si dhakhso leh, isgaarsiinta adduunka oo dhan.
Bixi muunado 3-5 maalmood gudahood, ballanqaad inaad dhammayn doonto naqshadeynta/kobcinta caaryada 15 maalmood gudahood.
Waxaan soo aruurineynaa injineero R&D oo heer sare ah, soo saaraya alaabo, qalabaynta naqshadeynta, sameynta nafteena, 10+sano oo iftiin ah, khibrad xalka isku xirka korantada, is-habeynta, waxay bixisaa xalka isku-xirka buuxa. Ku fiicnaanshaha leh qalab tayo sare leh iyo alaabada birta ah ee birta ah, waqtiga hogaaminta gaaban, adeegga jawaabta degdegga ah.
Leh shaqaale xirfad sare leh, u siiya macaamilka adeeg tayo sare leh
Houd oo hogaaminaya tikniyoolajiyadda horumarsan, xoogga saar kobcinta & soo bandhigida hibooyinka. Hadda, meheraddu waxay leedahay shaqaale xirfad sare leh, oo ku yaal Houd oo leh 4 Dhakhtar, iyo 26 qof ayaa leh shahaadada koowaad ama heerka labaad, 40% dhammaan shaqaaluhu waxay leeyihiin shahaadada kulliyadda ama wixii ka sareeya. Dhammaan shaqaaluhu waa kuwo aad u shaqeeya, hal -abuur leh, naftooda dhaafsiiya, kor u qaada horumarka ganacsiga, siiya xalal cusub qiimeeyaha.
Waqtigan xaadirka ah, meheraddu waxay ku hawlan tahay qorsheynta horumarinta badeecadaha cusub, waxay u abuureysaa suurtogal aan xadidnayn isku -xirka adduunka & faafitaanka dhawaaqa dabeecadda, intaas wixii ka dambeeya, NBC waxay sidoo kale fiiro gaar ah u leedahay bulshada bulshada, dhaqanka waxbarashada iyo deegaanka cagaaran iwm.